Mufananidzo-mu-Mufananidzo uye Maakaundi Ekushandisa Kuuya kuApple TV | IPhone nhau
Zuva rega rega rinopfuura pane zvishoma kune WWDC, chiitiko chinoshamisa ichi apo vanogadzira iOS, macOS uye zvimwe zvigadzirwa zve software yekambani yeCupertino vanoungana. Nekudaro, iyo inoshanda sisitimu iyo ichine zvakawanda zvekushandisa ndeye chaiyo tvOS, iyo Apple TV software haina kuidzivirira kuti ishandure iyo ive ine simba kwazvo multimedia nzvimbo pamusika izvozvi, zvisinei, ichiri kushaya zvimwe zvinhu izvo vamwe Apple zvishandiso vatove nechikwereti chavo. Zvinoenderana nekubuda kwekutanga, tvOS 11 ichaisa zvakakosha zvinhu zvitsva sekugona kushandisa akasiyana maApple ID kuti upinde mukati, pamwe nePikicha-mu-Mufananidzo chimiro. yatovapo mu macOS uye iOS.
Kwave kuri svikiro The Verifier ndiani akatanga zivisa kuti chii chingave iwo makuru makuru esoftware ekuvandudza paApple TV kupera kwegore rino. Chokwadi ndechekuti, zvinoshamisa kuti, mashandiro eApple haatombotaurwe nezvazvo padhuze neWWDC, muchokwadi, hapana munhu anotarisira chero chinhu kubva kuIOS 11 padanho rekugadzira uye mashandiro, mashoma kupfuura iwo anogona kuuya neiyo iPhone iyo ichave iri yakaburitswa gore rino kuratidza gore rechigumi rekutanga kwekambani yeCupertino yekambani yekutanga smartphone.
Uye zvakare, iyo ruzivo Ivo zvakare vanotaura nezve mukana weGroup Kudana yeFaceTime kutora kutonga kweTV yedu. Nekudaro, isu tinogona kuziva zvishoma mazuva mazhinji mushure meWWDC, kunyangwe hazvo Apple TV ine inoshamisa Hardware uye inoshandisa system inoenda nayo, haina kungoputika senzvimbo yemultimedia, ichivandudza kugona kwayo kwese nekudaro kukwezva Ruzhinji ruzhinji , Apple TV ichiri chigadzirwa chidiki mukatalog yeApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Multi-mushandisi uye Mufananidzo-mu-Mufananidzo paApple TV? Maererano nerunyerekupe kana
Samsung nevatengesi vayo veKorea kutonga iyo iPhone 8 cheni yekugadzira